को हो निर्मलाको हत्यारा खोज्नै नदिने ? « Janata Samachar
को हो निर्मलाको हत्यारा खोज्नै नदिने ?
आन्दोलनका नाममा हत्यारा खोज्न रोकावट र अनुसन्धानमा असहयोग किन ?
प्रकाशित मिति : 14 September, 2018 4:10 pm
काठमाडौं । कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मला पन्तको विषय अरु पेचिलो बन्दै गएको छ । घटनामा दिनप्रतिदिन विभिन्न प्रकृतिबाट नयाँ तथ्य आउन थालेपछि यसको समापन कसरी होला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । घटनामा एक पछि अर्को आरोप जोडिँदै जानु, दोस्रो अनुसन्धान टोलीले काम गरिरहँदा, छानबिन समिति बनेर प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन खोजिँदा घटनालाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्दै संसदसमेत अवरुद्ध गरिनुको सन्देश र संकेत के हो ? अनि घटनामा त्रुटि भएका भए अनुसन्धानमा संलग्नलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइनु, निलम्बनमा परेका एसपीलाई ‘तारो’ बनाइनुको भित्री मक्सद के हो ?
निलम्बित एसपी कहाँ छन्, उनको अनुसन्धान टोलीसँग जोडिएका अन्य टोली के गर्दैछ ? केही रहस्यका पाटो उजागर गर्ने जनता समाचार डटकमको प्रयासः
के हो कञ्चनपुर घटनाको वास्तविकता?
कञ्चनपुरमा भएको निर्मला पन्तको हत्या घटनालाई विभिन्न कोणबाट हेर्दा र विश्लेषण गर्दा सबैले फरकतथ्य केलाएका छन् । घटनाअघि देखिको केही तथ्य हेरौँः
एसपी कञ्चनपुर छोडः
२०७५ साउन १ गतेदेखि भीमदत्त नगरपालिकाले गरेको करवृद्धिका विषयमा ठूलै विवाद भयो । त्यहाँको विवादले उग्ररुप लिएपछि अवस्थालाई साम्य पार्न प्रहरीले केही बल प्रयोग गर्नु परेको थियो । प्रहरीले सरकारी सम्पत्तिसंरक्षण गर्न खोज्दा र नगरपालिकासुरक्षा गर्ने क्रममा सामान्य टियर ग्यास फायर गर्नुप¥यो । त्यसपछि तत्कालीन कञ्चनपुरका एसपी डिल्लिराज विष्टको विरोधमा नाराबाजी भयो, एसपीलाई कञ्चनपुर छोड भन्नेजस्ता नारा लगाइएपछि कञ्चनपुरको अवस्था असामान्य बन्दै गएको थियो । नगरपालिकाका मेयरका सुरेन्द्र विष्टविरुद्धसमेत नाराबाजी गरिएको थियो । नगरपालिकामा गरिएको कर वृद्धि र छाडाचौपायाको विषयको विवादले थेग्न नसकेको आन्दोलन तीन–चार दिनसम्म चर्केको थियो । आन्दोलनक्रममा भिडसाम्य पार्न प्रहरीले लाठीचार्जका साथै सामान्य बल प्रयोग गरी अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । आन्दोलनक्रममा चार–पाँचसयको भिडले कञ्चनपुर अशान्त तुल्यायो । जसबाट प्रदर्शनकारीले हिर्काएको ढुंगा लागेर एक महिला प्रहरी घाइते भएकी थिइन् । उनको अहिलेसम्म पनि उपचार भइरहेको छ । उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा नगरपालिका सकारात्मक बन्नुपर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले यो घटनालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने थियो ।
निर्मला पन्त हराइन्
कञ्चनपुर अशान्त बनिरहेकै बेला साउन १० गते निर्मला पन्त हराइन् र उनको खोजीकार्य गर्ने क्रममा ११ गते उखुबारीमा बेवारिशे नग्न अवस्थामा शव फेला प¥यो । साउन ११ गते निर्मलाका आफन्तले वडा प्रहरी कार्यालयमा औपचारिक जानकारी गराए । निर्मला हराइरहेको खबर चौतर्फी फैलिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक जगदीश भट्ट, अस्थायी प्रहरी पोष्ट सालगाडीका सई रामसिंह धामी, मुद्धा शाखाका दुईजना हरी सिंह धामी र बासुदेव अवस्थीको टोली खोजीकार्यमा खटिएको थियो । खोजीक्रममा स्थानीय र प्रहरीको टोली संयुक्तरुपमा खटेको थियो । त्यसैदिन उखुबारी नजिकै एकजना स्थानीय चौधरी मूलको मान्छेले साइकल डो¥याइरहेका देख्दा खोजी कार्यमा गएको टोली नजिक पुगेको थियो । साइकलका विषयमा केरकार गर्दा त्यो निर्मलाको साइकल रहेको किताब त्यहीँ नजिक भेटिएपछि झन शंका पैदा भयो । प्रहरी र स्थानीयले चारैतर्फखोजिरहेका थिए । एकजना व्यक्ति कराए, ‘लाश यता छ’ सबैको ध्यान उतैपट्टि गयो र क्षणभरमै घटनास्थल मानिसको भिडले खचाखच भयो । निर्मला नग्न अवस्थामा भेटिएकी थिइन्, त्यतिबेलै एक महिला प्रहरीले उनको शरीर छोप्न त्यहीँ नजिक पानीमा फ्याँकिएको कपडाको टालो झिकेर छोपिदिएको भेटिन्छ र त्यहाँ धेरैको संख्यामा मानिसहरुको भिड थियो ।
मेयर घटनास्थल आएनन्
त्यसैदिन कञ्चनपुरका स्थानीयले शव फेला परेपछि त्यहाँका मेयर घटनास्थलमै आउनुपर्ने माग गरे। तर यसअघिको असामान्य परिस्थिति र शव भेटिसकेपछि आक्रोशित बनेका स्थानीयसँग सुरक्षा र अन्य व्यस्तताको कारण देखाउँदै मेयर उपस्थित भएनन् । र, त्यहाँका तत्कालीन एसपी विष्टविरुद्धसमेत करकै विषयमा धरपकड गरेको भन्दै नाराबाजी भएको थियो । अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मेयर र एसपी घटनास्थलपुगेको देखिँदैन । घटनास्थलमा रहेका डिएसपी र इन्स्पेक्टरले मिलाउन नसकेपछि स्थानीयको नाराबाजी शुरु भयो र शव नगरपालिका पु¥याइयो । नगरपालिकामा समेत नाराबाजी गर्न शुरु गरेका स्थानीयले शवलाई गेटभित्र नै प्रवेश गराउन थालेपछि प्रहरीसँग झडप भयो । प्रहरीले आफूले सकेसम्मको हर–प्रयास गरेर निर्मलाका आमाबुवालाई सम्झाएर शव पोष्टमार्टमका लागि अस्पताल पु¥यायो । अस्पतालमा पोष्टमार्टम गरियो र शद्गद्का लागि भन्दै र हत्यारालाई जसरीपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दै प्रहरीले आफन्तसँग सहमति गरेपछि निर्मलाका आफन्तले शव बुझे । तर आक्रोशित भिडले निर्मलाका बुवाआमालाई शव बुझ्न नदिएको र नानाथरी डर देखाएको विषय पनि ढिलोचाँडो बाहिर आउने नै छ ।
साउन १३ गते बेलुकी ७ नम्बर प्रदेशका प्रदेशसभा सांसद प्रकाश रावलको उपस्थितिमा बैठक राखियो र त्यहाँबाट निर्मलाको शवलाई आफन्तले बुझ्ने र सद्गद् गर्ने सहमति भयो । १४ गते बिहान साढे ७ बजे निर्मलाको शव दाहासंस्कारका लागि लगियो । जसमा २५ जना सुरक्षाकर्मीका साथ १ सय ५० जतिको सहभागिता थियो । भदौ १५ गते बिहान तत्कालीन कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज बिष्टको टोली निर्मलाका आफन्त भेट्न गए। यता प्रदर्शनकारीको नाराबाजी निरन्तर थियो । र, निर्मलाको हत्याको विषय चर्किदै गएपछि केन्द्रबाट साउन १३ गते नै सिआइबीको टोली घटनास्थल पुगिसकेको थियो । अनुसन्धानमा सिआइबीको टोली प्रमुख अंकुर जिसी, आरआइटीबाट केशव जोशीलगायत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली अनुसन्धानमा तल्लीन थियो ।
१ सय ५० जतिलाई सोधपुछ
प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानक्रममा १ सय ५० जना भन्दा बढीलाई निगरानीमा लिइएको र जसमध्ये १ सय २० जनालाई लिखित रुपमा सोधपुछका क्रममा कागज गराइएको छ । । अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय चक्र बडू, हेमन्ती भट्ट(जसको एसएमएसको शंका)ले सोधपुछका लागि समातिएको थियो । नेपाल प्रहरीको स्रोत साधनले भ्याए अनुसार अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी नभएको प्रहरीको दाबी छ । अनुसन्धानका क्रममा केन्द्रबाट गएको सिआइबीको टोलीले शंकाको रुपमा हेरिएकी बम दिदीबहिनीलाई समेत निगरानीमा लियो र उनीहरु बसेको घरको खानतलासी ग¥यो तर हालसम्म कुनै प्रमाण फेला परेन ।
भेटिए दीलिपसिंह विष्ट
कञ्चनपुर हत्यारालाई छिटो भन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनमै थियो । प्रहरीले अनुुसन्धान गर्दै जाँदा निर्मला पन्तको हत्या भएकै स्थानबाट स्थानीय दीलिप बिष्टलाई भदौ ३ गते पक्राउ ग¥यो र अनुसन्धान थाल्यो । अनुसन्धानक्रममा प्रहरीले सोधपुछमा लिइएका विषय र दीलिपले दिएको उत्तर मेल खाएको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको दाबी छ । प्रहरीले पक्रिएको २४ घण्टाभित्र उसबाट आएको चित्तबुझ्दो जवाफबाट सार्वजनिक ग¥यो र अनुसन्धान जारी नै रहेको बताएको थियो । दीलिप विष्टलाई भदौ ४ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । बाँकी उसका २४ दिन अनुसन्धानमै रहे ।
स्थानीय अरु आन्दोलित बने
जब दीलिप विष्टलाई अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरियो, त्यहाँका स्थानीय उग्र बन्दै गए र स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो । बम दिदीबहिनी, एसपीका छोरा, कांग्रेस महासमिति सदस्यका छोरामाथि समेत आरोप लगाइयो र सोधपुछ गरियो त्यहाँबाट समेत हालसम्म कुनै विषय सार्वजनिक भएका छैनन् । आन्दोलन चर्किदै गएपछि भदौ ७ गतेस्थिति तनावग्रस्त बन्यो । ७ गतेकै साँझ कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज बिष्टलाई धनगढी बोलाइएको थियो र त्यहाँ नयाँ एसपीका रुपमा कुबेर कडायत कार्यरत छन् । ८ गते कञ्चनपुरको स्थिति साम्य पार्न प्रहरीले गोली चलाउनु परेको थियो । तर, कञ्चनपुरको स्थिति साम्य भएन, झनै उग्र बन्दै गयो । ८ गते आन्दोलनक्रममा बालक शनी खुनाको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसपछि कञ्चनपुरमा कर्फ्यू लगाउनुपर्ने स्थिति पैदा भयो । प्रहरीले राम्रोसँग घटना अध्ययन गर्न नपाई तत्कालीन एसपी डिल्लीराज बिष्टलाई भदौ १० गते निलम्बित गरिएको थियो, अनुसन्धानलाई सहज बनाउन । त्यसपछिको स्थिति पनि कञ्चनपुरमा बेहाल नै बनेको थियो त्यहाँ लगाइएको कर्फ्यूले केही शान्त भएको कञ्चनपुरमा त्यसपछिको स्थिति पुनः गम्भीर बन्दै गएको छ । कानुनी राज्यको विषयमा वकालत गर्ने नै सरकारविरुद्ध र अनुसन्धानविरुद्ध विपक्षीमा ओर्लिएका छन् ।
विष्ट र बम दिदीबहिनी थुनामुक्त
आरोपित, अभियुक्त भनिएका दीलिप सिंह विष्ट र प्रहरीले हिरासतमा राखेकी बम दिदीबहिनी थुना मुक्त भएका छन् । आन्दोलनले अनुसन्धानलाई प्रभावित गराउँदा समस्या सिर्जना भएको छ । भदौ २७ गते डिएनएरिपोर्ट नकारात्मक देखिएकै कारण दीलिप रिहा भएका छन् । र, बम दिदीबहिनीको पनि घटनामा कुनै संलग्नता देखिएको छैन । राजनीतिक गन्ध मिसाइएको आन्दोलनमा अब हत्यारा को भन्ने प्रश्न उठेको छ । यतिमात्र नभई अनुसन्धानमा खटिएका एसपी र उनका छोराको डिएनए एकै साथ परीक्षण गराइँदासमेत आन्दोलन किन मत्थर भइरहेको छैन ?
प्रतिवेदन रोक्ला आँशुले ?
गृहले सहसचिव हरि मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । त्यसको म्याद पाँचदिन बढाइएपछि एकजना सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिए । उनले आफू मात्र निर्मलालाई न्याय दिन तम्सिएको भाषा बोले । केहीदिनमै फेरि उनी काममा फर्किएका छन् । थपिएको म्याद सकिँदैछ । मैनाली समितिको प्रतिवेदन आउँदैछ । तर, दुई वटा अनुसन्धान टोलीले गरेको अनुसन्धानमा कुनै नयाँ र फरक देखिएको छैन । विष्टको डिएनए मिलेन । त्यो डिल्ली विष्ट नेतृत्वको प्रहरीले भनेको थियो कि, २४ घण्टाको प्रगति हो । भोलि कुनै पनि बेला प्रहरीले वा सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गर्न सक्छ, २४ दिन अनुसन्धान बाँकी नै छ । तर, यहाँ त अनुसन्धान गर्न नदिने, बजारका चार ठाउँमा ढुंगामुढा गरेर शान्ति सुरक्षा खलल पु¥याउने काम भइरहेको विषय कहिल्यै बाहिर आएन ।
यति मात्रै होइन, निलम्वनमा परेका छन् डिल्ली विष्ट । उनको र छोराको समेत डिएन परीक्षण भएको छ । छानविन समितिका प्रतिवेदन आउँदैछ । तर, निर्मलाका आमाबाबुलाई घटनाको डेढ महिनापछि काठमाडौं ल्याएर आँशुको मार्केटिङ भइरहेको छ । संसद अवरुद्ध पारिएको छ । छानविन समितिको प्रतिवेदन कुर्न किन धैर्यता रहेन ? किन प्रतिवेदन हूलका पक्षमा आउनु पर्छ ? घटनालाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास किन भइरहेको छ ? मैनाली समितिको प्रतिवेदन आउने बेला अनि दोहो¥याएर भइरहेको अनुसन्धान नै प्रभावित पार्न कतै कुनै राजनीतिक शक्ति त परिचालन भइरहेको छैन ? निर्मलाको हत्याराले उन्मुक्ति नपाउन् । सतहमा देखिएका पात्र र चरित्रबारे पनि अनुसन्धान होस् । निर्मलाका परिवारले न्याय पाउने नाममा किञ्चित कुनै अमूक समूहको स्वार्थमा अब कञ्चनपुर अरु अशान्त बन्नु हुन्न । क्षति भोग्ने बन्नु हुन्न अनि हत्याको मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित पार्नेहरु पनि ढिलोचाँडो छानबिनको दायरामा आउने नै छन्, अहिले हत्यारा खोज्ने काम छाडेर आँशुको व्यापार गर्नेहरुलाई पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्न, छानबिन समितिसँग समन्वय गराउने अर्को नागरिक समाजको जरुरी देखिएको छ ।